BBC,war cusub ilahaan cumar, Ilhaan Cumar: “Horey ayaan uga soo badbaaday maleeshiyaad, haddana waan ka gudbayaa tan Trump” | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo BBC,war cusub ilahaan cumar, Ilhaan Cumar: “Horey ayaan uga soo badbaaday...
Ilaahan ayaa talaadadii la soo dhaafay hadalkan jeedisay mar ay la hadleysay dumar madow ah oo asal ahaan Afrikaan ah oo isugu soo baxay bannaanka hore ee dhismaha aqalka Koongareeska Mareykanka. Dumarkani ayaa halkaasi isugu yimid si ay taageero ugu muujinayaan Ilhaan Cumar oo in muddo ahba ay is-hayeen madaxweyne Donald Trump.
Ilaah ayaa ka mid ah labada gabdhood ee Muslimiinta ah ee markii ugu horreysay ka mid noqday Aqalka Koongareeska dalkaasi Mareykanka. Dhawr jeer oo hore ayaa Ilhaan lagu eedeeyay in ay jeedisay hadallo lid ku ah dadka Yuhuudda ahi balse waa ay beenisay eedeymahaasi.
” Balse sababtu waxaa weeye meel kastaa oo aan tagaba, waxaan hubaa in aan wada soconno dhammaantiin oo aan gacmaha is-haysanno.”
Ilhaan waxa ay sheegtay in madaxweyne Trump uusan kaligeed halis galinee uu sidoo kale halis galiyay dadka iyada ay matasho iyadoo tiri: “wuxuu halis galiyay dadka qaxootiga ah ee raba inay waddankan [Mareykanka] soo galaan, halista uu galiyay dadka Muslimiinta, halista uu galiyay dadka madowga ah iyo dumarka sida uu uga hadlo halista ay keenayso.”
Waxa ay intaasi ku dartay in Trump uusan ka fakarin dhibka uu hadalkiisa keeni karo “waa qof aanan ka fakarin hadalka uu isticmaalaayo iyo dhibaatooyinka uu keeni karo, iyadoo dadka uu ka dhigayo inay cadaw yihiin oo kale.”
Ilhaan waxa ay tilmaantay in la soo gaaray waqtigii Trump laga qaadi lahaa xilka madaxtinimada.
Horraantii bishii Abriil ayaa madaxweyne Trump waxa uu boggiisa Tweeter-ka ku qoray ‘hadal jeejees ah’ oo uu ula jeedo Ilhaan Cumar.
Sida uu sheegay wargeyska Daily Mail, madaxweyne Donald Trump oo oo ka hadlay kulan ay lahaayeen kooxda hoggaamisa siyaasadda Yuhuudda ee ku dhaqan Mareykanka ayaa Ilhaan Cumar u mahadceliyey isaga oo ku jeesjeesaya, waxa uuna yiri ‘…waan ilaaway illeen Ilhaan Cumar Israa’iil ma jecleyn, waan ka xumahay. Maya, Israa’iil iyadu ma jecla, miyey jeceshahay? Fadlan waan ka raalli gelinayaa.”
Wuxuu sidoo kale Xisbiga Dimuqraadiga ku eedeeyey inuu ogolaado in Yuhuud neceybka uu xisbigooda ku xidideysato.
Ilhaan Cumar ayaa xilligaasi iyana dhankeeda u jawaabtay Trump, waxa ayna farriin Carabi ah oo ay soo dhigtay Tweeter-keeda ku tiri “Allahayoow, dadkeyga u dambi dhaaf aqoon la’aantooda.”
Madaxweyne Trump ayaa aad loogu xusuustaa hadal uu jeediyay xiligii uu ku jiray ololaha doorashada, kaa oo uu ku weeraray Soomaalida ku nool dalka Mareykanka oo ahaa in falal argagixiso ay ku soo kordhiyen Minnesota, oo haddii isaga la doorto uu ka hortagi doono qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriinta Soomaalida.
Waxaa kale oo aad loo xusuusta hadal caan baxay oo ay tiri Ilhaan oo ahaa in dadka Minnesota aysan soo dhaweynin qaxootiga oo keliya, balse sidoo kale ay u diraan Washington, oo ay ula jeedday in dadka iyaga matala ay u diraan baarlamaanka dalkaasi oo fadhigiisu yahay Washington.
Isla markii la dhaariyay lhaan Cumar ayaa waxay farta ku fiiqday arrimo ay ka mid yihiin taageerada Trump uu siiyo dowladda Sacuudiga ee dagaalka ka wada dalka Yemen, waxaana ay ku baaqday in Trump uu joojiyo taageerada uu siiyo xulafada Sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka ka wada dalka Yemen. Arrintaa ayay Ilhaan ku kasbatay taageero iyo cadaawad labaduba.
Bartamihii bishii Febraayo ee sanadkan, ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu Ilhaan Cumar ugu baaqay inay iscasisho, ka dib markii sida uu sheegay ay ereyo “Yuhuud naceyb” ah ay ku qortay barteeda Tweeter-ka.
Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in xildhibanaada aqalka Kongreska ee taageersan Israa’iil ay dhaqaale ka helaan kooxaha taageera Yuhuuda, arrintaasi oo sababtay in Gudoomiyaha Kongreska, Nancy Pelosi ay sheegto in Ilhaan looga fadhiyo inay raalligeli ka bixiso hadalkaasi.
Trump ayaa sheegay in Yuhuud naceybka aysan melnana uga banaaneyn Maraykanka.
“Ilhan Cumaar hadalkii ay tiri waa mid aad u xun, waxayna ila tahay inay iska casishaa aqalka Kongreska ama ay ugu yaraan isaga tagtaa xubinimada guddiga arrimaha dibadda ee aqalka,” ayuu yiri Trump.
Waxaa kale oo uu sheegay in raalligelintii ay bixisay Ilhaan Cumar ay tahay mid daciif ah, oo waxaaa uu intaa raaciyay in hadalka kasoo yeeray Ilhaan uu yahay mid ay si weyn u aaminsan tahay
Warbaahinta Israa’iil ayaa wixii intaasi ka dambeeyay waxay si weyn uga hadlayeen Ilhaan Cumar, waxayna qaarkood ay ka qoreen faallooyin, qaarna ayba billaabeen warar ay ku doonayaan inay ku muujiyaan in Ilhaan ay tahay qof Yahuudda neceb.
Tusaale ahaan wargeyska Hareetz ee ugu afka dheer Israa’iil ayaa qoray faallo dheer oo uu cinwaan uga dhigay: “Ilhaan Cumar waxay fahmi la’dahay sababta ay dadka Maraykanka u taageeraan Israa’iil”.
Previous articleDaawo Qaarkamida Shacabka Sanaag oo ka hadlay Xukunka Deg Dega ah ee Xukuumadu Dul dhigtay
Next articleShirkadda Facebook oo mamnuucday shaqsiyaad halis ah